မူဆလင်ကျောင်းဆရာ ဦးခင်ဇော် (ခေါ်) ချားရ်နူမာနှင့် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခန်း
ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ပဋိပက္ခတွေရဲ့ အဓိက အကြောင်းတရားဟာ ဒေသခံ မူဆလင်တွေ သီးခြားနိုင်ငံ ထူထောင်လိုတာကြောင့် မဟုတ်ဘဲ ပညာရေး နိမ့်ကျမှုကြောင့်လို့ မောင်တောမြို့အခြေစိုက် ထင်ရှားတဲ့ မူဆလင်ကျောင်းဆရာ ဦးခင်ဇော် (ခေါ်) ချားရ်နူမာ က ပြောပါတယ်။
ဆရာ ဦးခင်ဇော် (ခေါ်) ချားရ်နူမာ ကို RFA အဖွဲ့သား ကိုကျော်ကျော်အောင်က မောင်တောမြို့ ကြံ့ခိုင်ဖွံ့ဖြိုးရေး ပါတီရုံးမှာ တွေ့ဆုံမေးမြန်းထားပါတယ်။
လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေ အရေးယူဖို့ မြန်မာကို ဂျပန် တိုက်တွန်း
ရသေ့တောင်က ကျောင်းတွေမှာ ယာယီစခန်းချတာကို တပ်မတော် ငြင်းဆို
AA စစ်ဦးချုပ်ညီအမှုမှာ ကန့်ကွက်ထားတဲ့ အထောက်အထားကို တရားရုံးလက်ခံ
ရခိုင့်တပ်တော် AA ထောက်ခံမှုနဲ့ အကြမ်းဖက်ဥပဒေ
AA အဖွဲ့ဝင်တွေလို့ စွပ်စွဲခံထားရသူတွေကို မန္တလေးမှာ တရားစွဲ
ဒေသအရေးအတွက် ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့ တွဲလုပ်ဖို့ ALP ကမ်းလှမ်း
စစ်တွေသားနှစ်ဦး ပစ်ခတ်ခံရလို့ ဒဏ်ရာရ၊ သေနတ်သမားကို မမိသေး
တိုက်ပွဲကြားက ရခိုင်ကလေးတွေရဲ့ ပညာရေး
ဟိန္ဒူတစ်ရာကျော်အသတ်ခံရမှု ၂ နှစ်ပြည့် ဆုတောင်းပွဲ
That answer is absolutely wrong. I know verywell . Cleric and their terrorist mambers prohibited the children to go State schools but force to go to the school which were opened in mosques. Children could learn Auradu or Bangali language and Koren. They threaten the kids and young people not to go to state schools.
Oct 09, 2012 01:56 PM